Ny hoavin'ny fifandraisan'ny mpampiasa: Beyond Touchscreens
Zoma, Jolay 1, 2016 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny Shop Smart ity dia miresaka momba ny ho avin'ireo interface amin'ny mpampiasa mihoatra ny efijery. Angamba ilay interface mpampiasa mandroso indrindra ampiasaiko anio ny Apple Watch. Ny fampifangaroana ny multi-touch, pressure, bokotra ary ny dials dia sarotra. Ary amin'ny rantsan-tanako lehibe dia tsy fanandramana tsy misy tohiny foana izany. Faly aho amin'ny ho avy! The Future User Interaction and Interfaces Shop Smart dia mamaritra ny teknolojia sasantsasany izay eo an-tsisin'ny fanovana ny fifandraisan'ny mpampiasa: Holographs - Microsoft